ဓမ္မတာ ကာလအလိုက် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေ ရှိမရှိ
HomeSexLifeဓမ္မတာ ကာလအလိုက် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေ ရှိမရှိ
Uncle Jam March 17, 2019
ပထမဆုံး.. ရာသီလာနေချိန်မှာ ကိုယ်ဝန် ရနိုင်သလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေး..
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ အရမ်းနည်းပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်တာတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး.. အရမ်းရှားပေမဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်..
အကြမ်းဖျင်းရှင်းပြရရင်တော့ ဓမ္မတာစက်ဝန်းဟာ ၂၈ ရက်တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ၃၀ ရက်တစ်ခါ၊ ၃၂ ရက်တစ်ခါ လာတတ်ပါတယ်.. ၂၈ ရက်တစ်ခါ လာတဲ့သူတွေက ကိုယ်ဝန်ရချင်ရင်တော့ ဓမ္မတာစလာတဲ့နေ့ကစပြီး နောက် ၁၃ ရက်၊ ၁၄ ရက် နဲ့ ၁၅ ရက်မြောက်နေ့တွေမှာ ကလေးယူရင် ရကိုရပါတယ်..။
၃၀ ရက်တစ်ခါလာတဲ့သူတွေကတော့ ရာသီစတဲ့နေ့ကနေ တွက်ရင် ၁၄ ရက်၊ ၁၅ ရက်နဲ့ ၁၆ ရက်မြောက်နေ့တွေဆို ကလေးရတတ်ပါတယ်..
၃၂ ရက်တစ်ခါလာတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း ၁၅ ရက်၊ ၁၆ ရက်နဲ့ ၁၇ ရက်မြောက်နေ့တွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေ အများဆုံးပါပဲ..
အဲ့ဒါဘယ်လိုတွက်တာလဲဆိုတော့ ၂ နဲ့စားပြီး ရတဲ့နေ့ကို ရှေ့တစ်ရက် နောက်တစ်ရက် ပေါင်းယူတာပါ..။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သားအိမ်ထဲကို လွှတ်ချတဲ့သားဥက ၂၄ နာရီပဲအသက်ရှင်နိုင်လို့ပါ.. အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ရက်တွေကတော့ သားဥလွှတ်ချတဲ့ရက်တွေပေါ့..
၂၈ ရက်တစ်ခါ၊ ၃၀ ရက်တစ်ခါ၊ ၃၂ ရက်တစ်ခါ ပုံမှန် ဓမ္မတာဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေက ရာသီလာချိန် ၂ ရက်ကနေ ၈ ရက်အတွင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ဓမ္မတာလာချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ရတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး..
ဒါက အများစုမှာဖြစ်တတ်တာပါ.. ဒါပေမဲ့ တချို့မိန်းကလေးတွေကျတော့လည်း ၂၄ ရက်တစ်ခါ လာတတ်တာတို့ ရှိပါတယ်.. အဲ့လိုမျိုး shorter menstrual cycle ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ရာသီလာနေချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ရတတ်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ ရှားတယ်ပေါ့နော်.
အဲ့လိုမျိုးလူတွေက ရာသီပြီးပြီးချင်းမှာလည်း ကိုယ်ဝန်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ သုတ်ပိုးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အကြာဆုံးငါးရက်အထိ နေနိုင်လို့ပါ.. menstrual cycle တိုတဲ့လူတွေ ( ဥပမာ ၂၄ ရက်တစ်ခါမျိုး) ဆိုရင် ရာသီစစချင်းကစတွက်ရင် ၁၁ ရက်၊ ၁၂ ရက်နဲ့ ၁၃ ရက်မြောက်နေ့တွေမှာ သားဥလွှတ်ချတတ်ပါတယ်.. အဲ့အချိန် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သုတ်ပိုးရှိနေခဲ့ရင် ကလေးရနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်းရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်း ဓမ္မတာပြီးချိန်မှာ ကလေးရနိုင်ချေရှိပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ရက်တွေကတော့ အတိအကျကြီးရနိုင်တဲ့ရက်တွေပေါ့နော်..
ကလေးရနိုင်ချေအနည်းဆုံးအချိန်ကတော့ ဓမ္မတာမစခင်ပါပဲ.. အဲ့အချိန်မှာ လုံးဝလုံးဝကလေးမရနိုင်ပါဘူး..။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ဘယ်တူမလဲနော်.. ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ တော်တော်သက်ဆိုင်ပါတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟုသုတအဖြစ်တော့ သိထားသင့်တယ်နော် ယောင်းတို့..
Credit - For Her Myanmar
ပထမဆုံး.. ရာသီလာနခြေိနျမှာ ကိုယျဝနျရနိုငျသလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးလေး..
ဖွဈနိုငျခကြေတော့ အရမျးနညျးပါတယျ.. ဒါပမေဲ့ မဖွဈနိုငျတာတော့လညျး မဟုတျပွနျဘူး.. အရမျးရှားပမေဲ့ ဖွဈတတျပါတယျ..
အကွမျးဖငျြးရှငျးပွရရငျတော့ ဓမ်မတာစကျဝနျးဟာ ၂၈ ရကျတဈခါ ဒါမှမဟုတျရငျလညျး ၃၀ ရကျတဈခါ၊ ၃၂ ရကျတဈခါ လာတတျပါတယျ.. ၂၈ ရကျတဈခါ လာတဲ့သူတှကေ ကိုယျဝနျရခငျြရငျတော့ ဓမ်မတာစလာတဲ့နကေ့စပွီး နောကျ ၁၃ ရကျ၊ ၁၄ ရကျ နဲ့ ၁၅ ရကျမွောကျနတှေ့မှော ကလေးယူရငျ ရကိုရပါတယျ..။
၃၀ ရကျတဈခါလာတဲ့သူတှကေတော့ ရာသီစတဲ့နကေ့နေ တှကျရငျ ၁၄ ရကျ၊ ၁၅ ရကျနဲ့ ၁၆ ရကျမွောကျနတှေ့ဆေို ကလေးရတတျပါတယျ..
၃၂ ရကျတဈခါလာတဲ့သူတှဆေိုရငျလညျး ၁၅ ရကျ၊ ၁၆ ရကျနဲ့ ၁၇ ရကျမွောကျနတှေ့မှော ကိုယျဝနျရနိုငျခြေ အမြားဆုံးပါပဲ..
အဲ့ဒါဘယျလိုတှကျတာလဲဆိုတော့ ၂ နဲ့စားပွီး ရတဲ့နကေို့ ရှတေ့ဈရကျ နောကျတဈရကျ ပေါငျးယူတာပါ..။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သားအိမျထဲကို လှတျခတြဲ့သားဥက ၂၄ နာရီပဲအသကျရှငျနိုငျလို့ပါ.. အပျေါမှာ ပွောထားတဲ့ရကျတှကေတော့ သားဥလှတျခတြဲ့ရကျတှပေေါ့..
၂၈ ရကျတဈခါ၊ ၃၀ ရကျတဈခါ၊ ၃၂ ရကျတဈခါ ပုံမှနျ ဓမ်မတာဖွဈတတျတဲ့သူတှကေ ရာသီလာခြိနျ ၂ ရကျကနေ ၈ ရကျအတှငျးရှိမယျဆိုရငျတော့ ဓမ်မတာလာခြိနျမှာ ကိုယျဝနျရတာမဖွဈနိုငျပါဘူး..
ဒါက အမြားစုမှာဖွဈတတျတာပါ.. ဒါပမေဲ့ တခြို့မိနျးကလေးတှကေတြော့လညျး ၂၄ ရကျတဈခါ လာတတျတာတို့ ရှိပါတယျ.. အဲ့လိုမြိုး shorter menstrual cycle ရှိတဲ့ မိနျးကလေးတှကေ ရာသီလာနခြေိနျမှာ ကိုယျဝနျရတတျပါတယျ..။ ဒါပမေဲ့ ရှားတယျပေါ့နျော.
အဲ့လိုမြိုးလူတှကေ ရာသီပွီးပွီးခငျြးမှာလညျး ကိုယျဝနျရတာဖွဈနိုငျတယျ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ သုတျပိုးက ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အကွာဆုံးငါးရကျအထိ နနေိုငျလို့ပါ.. menstrual cycle တိုတဲ့လူတှေ ( ဥပမာ ၂၄ ရကျတဈခါမြိုး) ဆိုရငျ ရာသီစစခငျြးကစတှကျရငျ ၁၁ ရကျ၊ ၁၂ ရကျနဲ့ ၁၃ ရကျမွောကျနတှေ့မှော သားဥလှတျခတြတျပါတယျ.. အဲ့အခြိနျ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ သုတျပိုးရှိနခေဲ့ရငျ ကလေးရနိုငျပါတယျ။
ပုံမှနျရာသီစကျဝနျးရှိတဲ့ မိနျးကလေးတှဆေိုရငျလညျး ဓမ်မတာပွီးခြိနျမှာ ကလေးရနိုငျခရြှေိပါတယျ.. ဒါပမေဲ့ အပျေါမှာ ပွောထားတဲ့ရကျတှကေတော့ အတိအကကြွီးရနိုငျတဲ့ရကျတှပေေါ့နျော..
ကလေးရနိုငျခအြေနညျးဆုံးအခြိနျကတော့ ဓမ်မတာမစခငျပါပဲ.. အဲ့အခြိနျမှာ လုံးဝလုံးဝကလေးမရနိုငျပါဘူး..။
လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျကတော့ ဘယျတူမလဲနျော.. ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့ ဒီအခကျြလေးတှနေဲ့ တျောတျောသကျဆိုငျပါတယျ.. ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဗဟုသုတအဖွဈတော့ သိထားသငျ့တယျနျော ယောငျးတို့..
Ladies Special SexLife